Iza amintsika no tsy mbola nahatsiaro ho menatra ny tenany mihitsy teo amin'ny fiainany? Iza amintsika no tsy mbola nanao zavatra izay miteraka alahelo ny mieritreritra azy, ary tena mampihorohoro mihitsy ny fisaintsainana fa mety ho fantatry ny olona izany? Efa samy nandalo teo avokoa angamba isika rehetra, sa tsy izany?
Alaivo sary an-tsaina ny nahazo an'i Adama sy i Eva rehefa avy nihinana ny voan'ilay hazo voarara izy ireo, na koa ny nanjo an'i Jakôba rehefa namitaka ny rainy mba hahazoana ny tso-drano tokony ho an-jokiny, ary avy eo rehefa tsy maintsy nandositra ny fahatezeran'ilay rahalahiny izy. Nanao ahoana ny torimasony nony alina? Meteza ihany koa ho eo amin'ny toeran'ilay vehivavy tratra nijangajanga, izay "azo olan-tanana" Jao. 8:4. Toy izany koa i Davida, ny Sal. 32 no nanehoany ny fanenenany mafy noho ny toetrany tany aloha.
Mazava loatra fa anisan'ny mahatonga ny filazantsara ho an'ny olona rehetra maneran-tany izany, ary ny fahafatesan'i Kristy ho an'ny taranak'olombelona manontolo. Na inona na inona tsy fitoviantsika dia zavatra iray loha no mampiray antsika: samy mpanota avokoa.
Noho izany, ny fanabeazana kristianina marina dia tokony hanoro antsika ny hany vahaolana hialana amin'izao toerana mahonena misy antsika izao. Hijery ny amin'Ilay hany vahaolana ho antsika isika amin'ity herinandro ity, dia Ilay Mpampianatsika Lehibe izany.
Nikiry hatrany ilay vehivavy
I Jesosy no Ilay Mpampianatra lehibe. Miseho mazava ny tena toetran'Andriamanitra ao amin'ny fampianarany sy eo amin'ny fiainany. Koa manaitra kokoa ny anehoan'ity tantara ara-pilazantsara ity izany. Voalaza ao ny olona iray izay nikiry nangataka fanampiana tamin'i Jesôsy rehefa tsy namaly azy avy hatrany Izy.
Vakio ny tantaran'ny nihaonan'i Jesôsy tamin'ny vehivavy jentilisa iray (na "Kananita"), izay avy tamin'ny faritanin'i Tyro sy Sidona (Mat. 15:21-28; Mar. 7:24-30). Mariho fa sorena tamin'io vehivavy io ireo olona nanodidina an'i Jesôsy, ary na i Jesôsy aza dia niseho ho nanilika azy. Ahoana no fahitanao ny fahasahian'ity vevivavy ity? Inona ny lesona omen'ity tantara ity antsika mikasika ny fomba fampianaran'i Jesôsy ny hafa?
Nanakaiky ny tanin'i Tyro sy Sidona i Jesôsy. Nandalo teo amin'ny toerana izay be vahiny sy foko maro tsy mifankahazo Izy. Nanamavo ny Jiosy nipetraka tany ambanivohitra ny mponina niteny grika tany an-drenivohitra, ary ny Jiosy koa nanao tsinontsinona azy ireo.
Vao tsy ela talohan'izao no namonoan'i Herôda, mpanapaka tsy nisy hazondamosina tao Galilia, tany niavian'i Jesôsy, an'i Jaona mpanao batisa. Niombon-kevitra tamin'i Jaona raha ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka toa fambara loza ny namonoana an'i Jaona.
Rehefa tsapan'i Jesôsy fa sarotra ny fizotry ny toe-javatra, dia niditra tao amin'ny trano anankiray Izy, araka ny fitantaran'i Marka, ary nanantena fa tsy hisy olona hahafantatra ny toerana misy Azy (Mar. 7:24). Saingy hitan'ilay vehivavy Izy.
Raha ny kolontsaina tamin'izany fotoana sy toerana izany dia tsy nahazo naneho ny heviny ny vehivavy. Ankoatra izay, tsy nifampiraharaha tamin'ny foko sy ny kolontsaina nisy azy ny Jiosy, ka izany no vao mainka nampanano sarotra ny toerana nisy azy.
Narary anefa ny zanak'ity vehivavy ity. Nila fanampiana izy, ary nikiry nangataka ihany.
Tsy nahoan'i Jesôsy izany. "Tsy mety raha maka ny mafon-jaza izy ka manipy azy ho an'ny amboakely" hoy Izy - Mat. 15:26. Mety ho nandratra azy izany fanamarihana nataon'i Jesôsy izany.
Nisy zava-niseho nahavariana anefa. Namaly ilay vehivavy. Fantany tsara ny amboa - tsy tahaka ny Jiosy izay tsy tia azy ireny na dia atao namana an-trano aza ka hoy izy: 'Marina izany, Tompoko; fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany.' - Mat. 15:27.
Nanova zavatra ny tenin'ity vehivavy ity. Toa nandresy lahatra izany ka dia nositranin'i Jesôsy ny zanany.
-Tongava aminao araka izay irinao'" - Mat. 15:28. Ahoana no fahazoantsika izany teny izany? Ahoana anefa no tokony havalintsika raha tsy araka izay irintsika ny zava-miseho?